နေရာတကာ ဂျာနယ် အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) - ဖွံ့ဖြိုးဆဲနုိုင်ငံများ၏ သိပ္ဗံနှင့် သင်္ချာပညာရေးဆုိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲအတွေ့အကြုံများ
မြန်မာပြည်အနှံ့ သာမက ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက် – ရနောင်း။ အမေရိကားအနှံ့ အပါအ၀င် ဂျပန်နိုင်ငံထိ ခြေဆန့် အခမဲ့ဖြန့် တော့မည့် နောက်အပတ် ထွက်မယ့်အောက်တိုဘာ နေရာတကာဂျာနယ်ထဲမှာ…
တော်လှန်ရေးရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ရဲဘော်အစစ်တဦးရဲ့ အတိတ်တဒေသ … …
ဒိုက်ဦးက အပေါင်ခံ လယ်ယာက ပုံစံ (၇) ပေါက်လို့အရပ်ကူဖို့လုပ်ရတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ….
အမေရိကားက မြန်မာရွာအနီးမှာ ဖမ်းခံထိသွားပီဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသား လူငယ်ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာများ …
ဆရာကြီးတင်မိုး အမည်ပေးထားတဲ့ ထူးခြားထင်ရှားသူအချိုနှင့် ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်များ နေထိုင်ရှင်သန်ရာ အမေရိကားက မြန်မာရွာ အထူးစာမျက်နှာများထဲက…
ဒီလိုသူခိုးမျိုး တို့အားကိုးသည်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ခေါင်းဖြတ်သတ်စေဆိုတဲ့ အယ်ဒီတာအာဘော်အဖြစ် သုံးထားတဲ့ ဆရာမင်းမြတ်မောင်ရဲ့ ထိရှ သွက်လက်တဲ့ ရိုက်ချက်ပြင်းဆောင်းပါးများ…
မဖော်ပြရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ စိတ်အမောပြေစရာ ဆရာ သန်၎ကိုရဲ့ ဟာသများ…..
စိန်ဂေါ်လီ မောင်မောင်ကြွက်ရဲ့ ခုတ်ထစ်ဆော်ပြေးမန်းတလေး သရော်စာ….
Break နောက်ဆုံးသတင်း၊ မပါမဖြစ်တဲ့ စခန်းမှူးထွန်းရှိန်ရဲ့ ထူးဆန်းထွေလာမှုခင်းပဒေသာများ … စတဲ့ သုတရသ အနု ဗဟု ရတု စုံလှလွန်းလို့လူတိုင်း အတွက် တခုခုကျန်ရစ်စေဖို့ နေရာတကာကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ဖို့ ရယ် …
(သြော် ဒါနဲ့ နေရာတကာကို အခမဲ့ ကူဆွဲပေးနေတဲ့ မတူညီတဲ့ ကာတွန်းဆရာနှစ်ဦးရဲ့” ခြင်းလုံးလောက်နဲ့ တက်မလာနဲ့ ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုတည်းအောက်က ကာတွန်း နှစ်ကွက်လဲ ပါသေးပါကြောင်း)